Faallo: Siyaasi aanan la filayn oo ku soo biiray musharixiinta Prime Minsterka (xog cusub)
Xulshada Prime Minsterka cusub ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inay marayso heer gebo gebo ah ayadoo la leeyahay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud waxaa uu ka yaabsan doonaa dadkii wax saadaalinayay oo dhan. Waxaana uu keeni doonaa qof cusub oo aan ka tirsanayn dariiqada Damjadiid oo weliba denbi aanan ka gelin dadka soomaaliyeed. Shaqsigaas oo aqoon iyo karti uleh shaqada culus islamaraakaasna fahmi kara Beesha caalamka gaar ahaan Maraykanka . Haddaba wararka ka imaanaya dadka ku wareegsan madaxweynaha cusub ayaa shaaca ka qaaday qofkaas cusub ruuxa uu yahay. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa cadaadis badan uga kala yimid meelo badan. Cadaadiskaas ma soo koobi karno laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa dhowr qodob oo kala ah: